नेपालमा कहिलेदेखि घट्छ को’रोना महा’मारी ? यस्तो छ स्वा’स्थ्य मन्त्रालयको अनुमान : – Sadhaiko Khabar
नेपालमा कहिलेदेखि घट्छ को’रोना महा’मारी ? यस्तो छ स्वा’स्थ्य मन्त्रालयको अनुमान :
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८ समय: १९:४९:३१
काठमाडौ / अहिले महामा’रीका रुपमा फैलिएको सं क्र म ण चार हप्ता पछि घट्दै जाने स्वा’स्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वा’स्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आगामी चार हप्तापछि सं क्रम ण दर घट्दै जाने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।
महा’मारीको अवस्था र सरकारले गरेका कामका बारेमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले अहिले दैनिक सरदर ८ हजार ३ सय जना नयाँ संक्र’मित थपिएको जानकारी दिँदै चार हप्तापछि यो दर घट्ने बताएका हुन् ।
निषेधा’ज्ञाका बा’बजुद कतिपय सेवाहरु सूचारु भइरहेको अवस्थामा अपेक्षाकृत नियन्त्र’णमा नआएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म नेपालमा १ लाख १५ हजार ५४७ सक्रिय संक्र’मित रहेका छन् ।
१ हजार ७२१ जना आई’सीयूमा उपचा’ररत रहेकोमा ४२४ जना भेन्टि’लेटरमा छन् । मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार अहिले देशभर १५७ सरकारी र ४५ वटा निजी अस्प’तालमा को’रोना संक्रमि’तको निशुल्क उप’चार भइरहेको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा मुलुकमा ७ हजार ४२५ जना नयाँ संक्र’मित फेला परेका छन् । स्वा’स्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप ७ हजार ४२५ जनामा को’रोना पुष्टि गरेको हो । जम्मा २० हजार ४५३ नमूना परी’क्षण गराउँदा ७ हजार ४२५ जना’मा रो’ग देखिएको हो । यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा ७ हजार १३५ जना रोग’मुक्त भएका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा थप १८५ जनाले ज्या’न गुमा’एका छन् । हाल १ लाख १५ हजार ४४७ जना सक्रिय संक्र’मित छन् । क्वारेन्टा’इनमा ९२४ जना रहेका छन् ।